‘Akaiky ny farany…’ + ‘ny nitorahako blaogy’ | GAZETY_ADALADALA
‘Akaiky ny farany…’ + ‘ny nitorahako blaogy’
Posted on 25/12/2009 by gazetyavylavitra
Tsy farany amin’ilay eritreretinao akory no tian’ny lohateny ho lazaina. Haiko sahady izay tao an-tsainao, nefa moa tsy iny ao an-tsainao iny ihany no mety hanam-piafaràna, fa ny zavatra rehetra mihitsy. Hoy i Mama Bako izay fony fahavelony hoe: Misy farany ny zava-drehetra.
Roa taona izao no nirotsahako nanoratra teto anivon’ny fitorahana blaogy amin’ny teny Malagasy. Janoary 2008. Efa nisy ihany ny fampakàrana sary sy soratroratra tany amin’ny sehatra hafa toy ny skyrock sy ny hafa, saingy ny teto amin’ny wordpress no tena nivelarako sy nanehoako izay noheveriko fa tsara avy amiko azoko natolotra anareo mpamaky. Marolafy ny lahatsoratra navoaka teto, miresaka ny lafim-piainana rehetra mihitsy, na ny sosialy io, na politika io. Hatramin’izay mety ho tsy dia misy dikany loatra aza angamba. Ny hafaliako anefa dia ny mahita fa maro ianareo no mitsidika azy isan’andro. Ary tsy amaritana toerana fa saiky manerana izao tontolo izao mihitsy. Niainga tao amin’ny SERASERA (NSD) aho (ary mpikambana ao foana), nandalo tamin’ny FBC (izay nanosika ahy bebe kokoa hampiasa ny WordPress), sady mitazona foana ny maha-tsy misy mpifehy sy tsy voafolaka ahy ihany koa anefa aho amin’izany rehetra izany. Nahasarotiny ahy fatratra ny fanajàna ny fitsipiky ny fanoratana ny teny Malagasy. Sahiko nosedraina ny rivotra sy ny tadio , noho ianao, ho anao. Nidirako ny kizo, notsivatsivahako ny gidragidra samihafa, nolalovako ny hovitra sy ny pararetra, niaretako ny hanoanana, izany rehetra izany, noho ianao, ary mbola ho anao avokoa. Nozakaina ny fandrahonana sy ny ahiahy ny amin’izay mety hanjo ny ankohonana. Tsy nahatsiarovana hafanana migaingaina sy mandoro, na ny alina tsy mba namana, na koa ny hatsiaka mamanàla. Mbola ho anao foana ireny. Impiry moa aho no tsy efa noraràna mba tsy hanohy intsony izay nataoko ho anao teto? Impiry no efa nisamaritaka ny fianakaviana mahita ahy anaty korontana? Tratra sary anaty fahitalavitra, sy ny sisa… Saingy mbola eto aho. Ao ny efa tsy miteny intsony, fa dia miandry mangina ny fotoana hiverenako avy amin’izay nalehako, raha tany alohaloha tany, dia saiky isaky ny mihodina no maneno ny finday, manontany sao misy mahazo ahy. Tsy tantaraina intsony ny fahaverezam-pitaovana eny ampanangonam-baovao eny, noho ny asa fanendahana sy ny harompaosy.
Adala angamba aho eee? Sa ahoana hoy ianao? Tsy maninona, fa ‘ndeha hatao hoe adalan’ny fitiavako anao. Saingy na dia adala toy izany aza aho, dia tsy afaka kosa hampanantena volana sy kintana ho anao. Izay kely sy bitika tratry ny fisainako fohy, takatry ny masoko (somary efa pahina io), ireny ihany no azoko ampanantenaina anao.
Fahatsiarovana sy fintina fohy ny lasako fotsiny iny, fa tsy hoe hametraka ny teboka farany amin’ny fitorahana blaogy akory aho. Rongoniko, toy ny fakàna sary ihany koa io, ka sarotra amiko ny tsy hifoka azy.
Hifàrana ity ny taona 2009. na ny marina kokoa dia ‘Akaiky ny farany‘. Tsy ny fara-andro anefa an. Aoka ho ao an-tsaina mandrakariva ilay teny hoe: ‘Fa raha mbola hisy koa ny farany…tsy ho foana ny fanantenako…’ Fanantenana mba ho ‘Akaiky ny farany amin’izao fitaintainan-dava iainan’ny Malagasy izao. Mba ho Akaiky ny farany amin’ny fijaliana iainan’ny isan-tokantrano. Mba ho Akaiky ny farany amin’izay rehetra mety ho sakana tsy ahafahan’ny tsirairay miroso ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany. MBa ho Akaiky ny farany amin’ny tsy fananan’ny sasany risi-po handray fanapahan-kevitra hentitra eo amin’ny fiainany. Mba ho Akaiky ny farany amin’ny …be dia be ka tsy ho voatanisa fa aoka ianao no hameno ny lisitra. Ampio aho.
Ka inona ary ity tiako lazaina amin’ny hoe ‘Akaiky ny farany… ity e?
Tsy inona akory fa ny fara-fandraisana anjara azonao entina ho an’izay blaogy tianao ho tohanana amin’ireo maro hitanao eto amin’ny tontolon’ny aterineto, mifandraika amin’ny tanjon’ny Best of Malagasy Blogs, na ny BOMBS 2009 , izay hifarana afaka andro vitsy monja. Tsy handingana ny faran’ny taona 2009. Telo andro eo sisa raha tsy diso aho.
Manentana anao àry tsy ho an’ny gazety_adaladala monja, fa ho an’ny tontolon’ny fitorahana blaogy Malagasy amin’ny ankapobeny mihitsy, mandraisa anjara, mifidiana, fa ho hery ho an’izay niantefan’ny safidinao izany, ary ho fandrisihana azy hitondra hatrany izay soa sy tsara avy aminy, no ho iza izy izay na ho iza.
Eto am-pamarànana, ny tenako dia maneho fisaorana hatrany ny mpikarakara, sy ireo blaogy mandray anjara rehetra ary ianareo handray anjara amin’ny fifidianana. Zavakanto amiko ny fitorahana blaogy, koa aza gaga raha toa ianao mahita fa nataoko any anaty sokajin’ny zavakanto ity hafatro ity.
Mirary ny rehetra hahatratra ny taona 2010, ka mba ho feno fahasalamana ny tsirairay, hahita vokatra amin’izay atao, ary ho taom-piotazana ny taona vaovao hovantanin-tsika rehetra
Filed under: Zavakanto | Tagged: 2010, Best of, blaogy malagasy, Bombs 2009 |
« Hafatra nalaina tao amin’ny SERASERA-GROUP Miteny izao tontolo izao, mihaino va ianao? »